Mihinam-bidy miaraka amin'ny ovy sy hoka | Recipe ao an-dakozia
Mihinà laoka miaraka amina ovy sy honina
Maria vazquez | | Resety trondro
Izaho dia tia sakafom-boankazo, indrindra ny akoho izay mampifangaro ovy sy trondro. Manomana azy ireo aho amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona. ATSINANANA manaova koba sy ovy Izy io dia iray amin'ireo tsotra indrindra ary iray izay ampidiriko ao anaty menio isan-kerinandro. Manasa anao aho hanandrana!
Lisitra tsotra misy fangaro sy fanomanana mety mahatonga an'io stew io ho safidy tsara ampiasaina isan'andro. Toy ny stews rehetra dia mitaky fotoana fa tsy dia mitaky be. Ny fanomanana fikolokoloana tsara no fototra amin'ity koba ity ary tsy tokony ho maika hanao izany isika. Aorian'izany dia saika vita ny asanao.
Izaho dia nanomana an'io sakafo io tamin'ny hake, manokana miaraka amin'ny valahana miforitra Azonao atao, mazava ho azy, ny mampiasa hake vaovao na soloina amin'ny trondro hafa. Amin'ny cod dia miasa tsara izy io ary na dia miaraka amin'ny sira aza. Na inona na inona safidinao, dia mila manandrana ianao!
Ity hake, ovy ary laoka ity dia mety indrindra hamenoana ny sakafo isan-kerinandro. Sakafo mora voaomana, matsiro ary feno.
Tongolo antonony 2, voatetika
Pepper dipoà lakolosy mena, voatetika
Poakaty 4, notetehina
Fofona miisa 6 hake, tapaho
Ovy 3, tapatapahina
⅔ paprika mamy eran'ny sotrokely
Lasopy trondro (na rano)
Afanainay ao anaty vilany ny menaka oliva ary tongolo poasy, dipoavatra ary hoka mandritra ny 15 minitra amin'ny hafanana antonony. Raha tsy maika, arakaraka ny maha-tongolobe ny tongolo sy ny tantely, dia vao mainka hisy tsiro ny sakafom-bary.
raha mbola manaova fehin-kibo ary ataontsika lafarinina izy ireo.
Vantany vao vita ny saosy dia esorintsika amin'ny lafin'ny casserole ny legioma ary ampio ny andilam-banitra. Andrahoy mandritra ny minitra vitsy amin'ny hafanana antonony mandra-volontsôkôlà volamena amin'ny andaniny roa.
avy eo ampianay ny ovy, ny voatabia nendasina sy ny paprika, manaova fotoana ary afangaroy daholo.
Manarona ron-trondro izahay, sarony ary avelao izy hahandro mandritra ny 15-20 minitra na mandra-pahatonga ny ovy malemy nefa tsy hikasika ny kasety.
Avy eo, manala sarona izahay, mamindra ny casserole izahay ary avelantsika handrahoana ny nahandro roa na telo minitra amin'ny hafanana antonony.
Aroso mafana ny hake, ovy ary ny hena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » vilia » Resety trondro » Mihinà laoka miaraka amina ovy sy honina